ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ဦးသန့် | NEW BURMA MEDIA
June 1, 2011 — newburma U Thant Article From Wikipedia, the free encyclopedia
U Thant (January 22, 1909 – November 25, 1974) wasaBurmese diplomat and the third Secretary-General of the United Nations, from 1961 to 1971. He was chosen for the post when his predecessor, Dag Hammarskjöld, died in September 1961.
“U” is an honorific in Burmese, roughly equal to “Mr”. “Thant” was his only name. In Burmese he was known as Pantanaw U Thant, in reference to his home town of Pantanaw.
U Thant was born in Pantanaw, Lower Burma, and was educated at the National High School in Pantanaw and at University College, Rangoon, where he studied history. He was the eldest of four sons and was born intoafamily of well-to-do landowners and rice merchants. His father, Po Hnit had helped establish The Sun (Thuriya) newspaper in Rangoon. He was alsoafounding member of the Burma Research Society. His father died when Thant was 14, andaseries of inheritance disputes forced Thant’s mother, Nan Thaung, and her four children into difficult financial times. After university Thant returned to Pantanaw to teach at the National School and had become its headmaster by the age of 25. During this time he became close friends with future prime minister U Nu, who was from neighbouring Wakema and was the local superintendent of schools. Thant regularly contributed to several newspapers and magazines under the pen name “Thilawa” and translatedanumber of books, including one on the League of Nations. U Thant wasadevout Buddhist.
When U Nu became the prime minister of the newly independent Burma, he asked Thant to join him in Rangoon and appointed him director of broadcasting in 1948. In the following year he was appointed secretary to the government of Burma in the Ministry of Information. From 1951 to 1957, Thant was secretary to the prime minister, writing speeches for U Nu, arranging his foreign travel, and meeting foreign visitors. During this entire period, he was U Nu’s closest confidant and advisor.
He also took part inanumber of international conferences and was the secretary of the first Asian-African summit in 1955 at Bandung, Indonesia, which gave birth to the Non-Aligned Movement. From 1957 to 1961, he was Burma’s permanent representative to the United Nations and became actively involved in negotiations over Algerian independence. In 1961, the Burmese government awarded him the title Maha Thray Sithu asacommander in the order of Pyidaungsu Sithu.
Thant began serving as acting Secretary-General from November 3, 1961, when he was unanimously appointed by the General Assembly, on the recommendation of the Security Council in Resolution 168, to fill the unexpired term of Dag Hammarskjöld. He was then unanimously appointed secretary-general by the General Assembly on November 30, 1962, foraterm of office ending on November 3, 1966. During this first term he was widely credited for his role in defusing the Cuban Missile Crisis and for ending the civil war in the Congo. He also said that he wanted to ease tensions between major powers while serving at the UN.
In April 1964, Thant accepted the Holy See’s designation of itself asapermanent observer. There appeared to be no involvement of the General Assembly or the UN Security Council in the decision. He received the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding in 1965.
U Thant was re-appointed secretary-general of the United Nations by the General Assembly on December 2, 1966, on the unanimous recommendation of the Security Council. His term of office continued until December 31, 1971, when he retired. During his time in office, he oversaw the entry into the UN of dozens of new Asian and African states and wasafirm opponent of apartheid in South Africa. He also established many of the UN’s development and environmental agencies, funds and programmes, including the UN Development Programme (UNDP), the UN University, UNCTAD, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), and the UN Environmental Programme.
Unlike his two predecessors, Thant retired after ten years on speaking terms with all the big powers. In 1961, when he was first appointed, the Soviet Union had tried to insist onatroika formula of three secretaries-general, one representing each Cold War bloc, something which would have maintained equality in the United Nations between the superpowers. By 1966, when Thant was reappointed, all the big powers, inaunanimous vote of the Security Council, affirmed the importance of the secretary-generalship and his good offices,aclear tribute to Thant’s work.
He was widely criticized in the US and Israel for agreeing to pull UN troops out of the Sinai in 1967 in response toarequest from Egyptian president Nasser. U Thant tried to persuade Nasser not to go to war with Israel by flying to Cairo inalast-minute peace effort.
Thant followed UFO reports with some interest; in 1967, he arranged for American atmospheric physicist James E. McDonald to speak before the UN’s Outer Space Affairs Group regarding UFOs.
On January 23, 1971, U Thant categorically announced that he would “under no circumstances” be available forathird term as secretary-general. For many weeks, the UN Security Council was deadlocked over the search forasuccessor before finally settling on Kurt Waldheim to succeed U Thant as secretary-general on December 21, 1971—Waldheim’s 53rd birthday—and just ten days before U Thant’s second term was to end.
In his farewell address to the United Nations General Assembly, Secretary-General U Thant stated that he felta“great sense of relief bordering on liberation” on relinquishing the “burdens of office”. In an editorial published around December 27, 1971, praising U Thant, The New York Times stated that “the wise counsel of this dedicated man of peace will still be needed after his retirement”. The editorial was titled “The Liberation of U Thant”.
While serving as secretary-general, U Thant lived in Riverdale, Bronx, ona4.75-acre (1.92 ha) estate near 232nd Street, between Palisade and Douglas avenues.
U Thant died of lung cancer in New York on November 25, 1974. By that time Burma was ruled byamilitary junta which refused him any honors. The then Burmese president Ne Win was envious of U Thant’s international stature and the respect that was accorded him by the Burmese populace. Ne Win also resented U Thant’s close links with the democratic government of U Nu which Ne Win had overthrown inacoup d’etat on March 2, 1962. Ne Win ordered that U Thant be buried without any official involvement or ceremony.
From the United Nations headquarters in New York where he was laid in state, U Thant’s body was flown back to Rangoon, but no guard of honour or high ranking officials were on hand at the airport when the coffin arrived except for U Aung Tun, deputy minister of education, who was subsequently dismissed from office.
On the day of U Thant’s funeral on December 5, 1974, tens of thousands of people lined the streets of Rangoon to pay their last respects to their distinguished countryman, whose coffin was displayed at Rangoon’s Kyaikasan race course forafew hours before the scheduled burial.
During the period of December 5–11, 1974, the student demonstrators also builtatemporary mausoleum for U Thant on the grounds of the RUSU and gave anti-government speeches. In the early morning hours of December 11, 1974, government troops stormed the campus, killed some of the students guarding the makeshift mausoleum, removed U Thant’s coffin, and reburied it at the foot of the Shwedagon Pagoda, where it has continued to lie.
Upon hearing of the storming of the Rangoon University campus and the forcible removal of U Thant’s coffin, many people rioted in the streets of Rangoon. Martial law was declared in Rangoon and the surrounding metropolitan areas. What has come to be known as the U Thant Crisis—the student-led protests over the shabby treatment of U Thant by the Ne Win government—was crushed by the Burmese government.
In 1978, U Thant’s memoirs, View from the UN, were posthumously published, initially by the American publishing house Doubleday.
မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသန့်ဟာ အာရှတိုက်ရဲ့ ပထမဆုံး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် တောင်ဘက်မုခ် အနီးမှာရှိတဲ့ ဦးသန့်ရဲ့ ဂူဗိမာန်ကိုတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားရောက် ဂါရဝပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဦးသန့်အကြောင်းကို ပြောကြတဲ့အခါ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ဈာပန အရေးအခင်းအကြောင်းတွေကိုသာ ကြားရတတ်ပြီး သူ့ရဲ့ စာပေရေးသားမှုနဲ့ လွတ်လပ်ရေးမရခင်က သူ့အကြောင်းတွေကို သိပ်မသိရပါဘူး။ တကယ်တော့ ဦးသန့်ဟာ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ၂ ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ ဂန္ထလောက မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲမှာ ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် ပထမဆု ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့်ရဲ့ ပထမဆုံးစာမူဟာ အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားတဲ့ စာမူဖြစ်ပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာ ပုံနှိပ် ဖော်ပြခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြပုံပြင်များ၊ နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီး ကျောင်းသုံးစာအုပ်၊ ဗမာသစ်နှင့် ပညာသစ်၊ ပြည်တော်သာခရီး (၃ အုပ်တွဲ) စတဲ့ စာအုပ်များကို ရေးသားခဲ့သလို နိုင်ငံရေး ဝေဖန်ချက်၊ စာပေ ဝေဖန်ချက်တွေ အပါအဝင် ပညာရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေကို သီလဝ၊ မောင်သန့်၊ ဦးသန့် ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်တွေနဲ့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာပေ ဝေဖန်ရေး နိုင်ငံရေးဝေဖန်ချက်တွေကို ရေးသားတဲ့အခါ သူ့ရဲ့အယူအဆတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးသားခဲ့သလို သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကလည်း ခေတ်မီတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က ၂ဝ ရာစုရဲ့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း စုစည်းထုတ်ဝေထားတဲ့ Who’s Who in the 20th Century စာအုပ်မှာ ဦးသန့်ရဲ့အကြောင်း ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာအရေးအခင်းများကို မတုန်မလှုပ်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း ရဲ့ အစမှာ ဆိုထားပါတယ်။ တကယ်လည်း ဦးသန့်က သူ့လက်ထက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းပေါင်း များစွာကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျူးဘား ဒုံးလက်နက်အရေး အခင်း (၁၉၆၂)၊ ကွန်ဂိုအရေးအခင်း (၁၉၆၃)၊ ဆိုက်ပရပ်စ် ပြည်တွင်းစစ် (၁၉၆၄)၊ အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန် ကက်ရ်ှမီးယားအရေးအခင်း (၁၉၆၅)၊ အာရပ်-အစ္စရေး ၆ ရက်စစ်ပွဲ (၁၉၆၇)၊ ဗီယက်နမ်စစ် စတဲ့ အရေးအခင်းပေါင်းများစွာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး View From the UN ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ သူပါဝင်ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအရေးအခင်းတွေအကြောင်း ဦးသန့်က ရေးထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြေရှင်းတဲ့အခါ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တွေကို တာဝန်အရ ချဉ်းကပ်တာမျိုးတွေအပြင် အပြန်အလှန် ခင်မင်မှုတွေနဲ့လည်း ချဉ်းကပ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲက ထူးခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိခဲ့ပုံကိုလည်း ရေးသားထားပါတယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ရေးသားတဲ့အထဲမှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျွန်ဆင်နဲ့ သူနဲ့ တူညီတဲ့အချက်တွေ ရှိပုံကို “သူက ကျနော့်ထက် ၅ လ လောက် ပိုကြီးပေမယ့် သူနဲ့ကျနော် ကောလိပ်ကို တချိန်တည်းရောက်တဲ့အကြောင်း၊ ကျောင်းဆရာဖြစ်တာလည်း တချိန်တည်း လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။ ပိုပြီး အံ့သြဖို့ အကောင်းဆုံးအချက်က သူ လက်ထပ်တဲ့နေ့နဲ့ ကျနော် လက်ထပ်တဲ့နေ့ ၁၉၃၄ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် တစ်ရက်တည်း ထပ်တူကျနေပါပဲ။ သူ ကွယ်လွန်တဲ့ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ဟာ ကျနော့်ရဲ့ ၆၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အချက်ကတော့ သမ္မတ ဂျွန်ဆင်ကို သူ့တိုင်းပြည်က ဂုဏ်ပြုသလို ဦးသန့်ကို မြန်မာပြည်သားတွေ ဂုဏ်ပြုခွင့် မရတဲ့အချက်ပါပဲ။
နိုင်ငံတကာမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ပေါ်ပေါက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဦးသန့်ဟာ မြန်မာပြည်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကိုလည်း ကြည်ညိုလေးစားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကွယ်လွန်ချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးက သူမရောက်ခင် ၂ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ဆရာကြီးရဲ့ ဈာပနထားရှိရာ စမ်းချောင်းက ဆရာကြီးနေအိမ်ကို ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာ သွားရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ လွမ်းသူ့မှတ်တမ်းမှာ “မြန်မာပြည်သို့ ခေတ္တပြန်ရောက်လာခိုက်တွင် ဆရာကြီးအား နောက်ဆုံးဂါရဝပြုခွင့်ရသဖြင့် ကျေနပ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ကောင်းရာသုဂတိ သွားစေရန် ဆုတောင်းရန် လိုမည်မထင်ပါ။ ဆရာကြီး ဘဝ တပါးပြောင်းသွားသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ နေတစ်ဆူ ကွယ်သည်နှင့် တူပါသည်” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ဦးသန့်ကို နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရေး နားလည်မှု ရရှိရေးကြိုးပမ်းချက်အတွက် နေရူးဆု ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဆုနဲ့အတူ ပါရှိတဲ့ အိန္ဒိယငွေ ရူပီး တစ်သိန်းကို ဦးသန့်က ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ကျောင်းရန်ပုံငွေကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ မာရှယ်တီးတိုးက ပေးအပ်တဲ့ ယူဂိုဆလဗ်တံခွန်ဘွဲ့တံဆိပ် အပြင် နိုင်ငံတကာက ပေးအပ်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ပေါင်း ၁၇ ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆု ပေးအပ်ဖို့တောင် လျာထားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့ထူးတွေကတော့ ဝဏ္ဏကျော်ထင်၊ သီရိပျံချီ၊ စည်သူဘွဲ့ နဲ့ မဟာသရေစည်သူဘွဲ့တွေဖြစ်ပြီး အားလုံးက တော်လှန်ရေးကောင်စီ အာဏာမသိမ်းခင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မတိုင်ခင်က ပေးအပ်ခဲ့တာတွေချည်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်နဲ့ မဆလ ခေတ်တွေမှာတော့ ဘာဆုမှ မပေးအပ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို ဂုဏ်ပြုတာတွေ မလုပ်တဲ့အပြင် ကမ္ဘာက လေးစား အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ ဈာပနကိုတောင် ပြီးစလွယ် တာဝန်ကျေ လုပ်ဖို့တာစူခဲ့တဲ့ မဆလ အစိုးရကို ကျောင်းသားတွေက အံတုတော်လှန်ခဲ့လို့သာ ဒီကနေ့ ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ ဦးသန့်ရဲ့ဂူဗိမာန် ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အဲဒီ ဈာပန အရေးအခင်း မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားရဲလောက်အောင်ပါပဲ။
ဦးသန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်စိန်တင်ရဲ့‘ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ဦးသန့်’ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလွဲလို့ ဦးသန့်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် လာမယ့် နှစ်ဆန်းမှာ ကျရောက်မယ့် ဦးသန့်ရဲ့ ရာပြည့်မွေးနေ့မှာ ဦးသန့်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်းအနားတွေ၊ ဦးသန့်ရဲ့ စာပေတွေကို ပြန်လည် ထုတ်ဝေတာတွေ စတဲ့ အမှတ်တရ အစီအစဉ်တွေ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ကျင်းပသူက ကျင်းပလို့၊ ကျင်းပခွင့်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရရင် ကောင်းလေစွ လို့ တဆက်တည်း စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါမှသာ မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိအောင်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦး ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို မျိုးဆက်သစ်တွေ သိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်မှာက ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ရှိလာဖို့ဆိုတာ ထီထိုးတာထက်ကို အခွင့်အလမ်း နည်းပါးလှတယ် မဟုတ်ပါလား။ ။
Posted in Short Documentary ဇာတ်လမ်းတိုရုပ်ရှင်များ. LeaveaComment »
Movies Trailer »